မွန်မွန့် အတွက် လှတစ်မျက်နှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မွန်မွန့် အတွက် လှတစ်မျက်နှာ
မွန်မွန့် အတွက် လှတစ်မျက်နှာ
Posted by ဇီဇီ on Oct 8, 2013 in Copy/Paste, Health & Fitness, How To.., Society & Lifestyle, Style & Beauty | 34 comments
မွန်မွန်လေးက အသားအရေအတွက် ရော စားဖို့ရော တပြိုင်နက် လုပ်ချင်လို့တဲ့။
အဲဒါ ဟိုရှာ ဒီရှာနဲ့ ရှာလိုက်တာ။
A) အသားအရေကို​လှပစေသော သစ်သီးများ
မက်မွန်သီးသည်လည်း အရေပြားအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော အစွမ်းထက် သဘာဝပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်.. ခြောက်သွေ့သော အသားအရေပိုင်ရှင်များအတွက် မက်မွန်သီးနဲ့ ဒိန်ချဉ်တို့ကို ရောစပ်၍ မျက်နှာပေါ်တွင် ပေါင်းတင်ပေးနိုင်ပါတယ်.. မိနစ်၂၀ခန့်ထားပြီး ရေခပ်နွေးနွေးဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးတဲ့အခါ ထူးထူးခြားခြား နူးညံ့စိုပြေလှပသော မျက်နှာအလှကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်…. မက်မွန်သီးမှာ ဗီတာမင် အေနှင့် စီ ပါရှိခြင်းကြောင့် အရေပြားကို တောက်ပစေခြင်း၊ နူးညံ့ပျော့ပြောင်းစေခြင်း၊ အမဲစက်များကို လျော့ပါးစေခြင်း၊ ရေဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးခြင်း စသော အစွမ်းသတ္တိများကြောင့် အလှအပပစ္စည်းများတွင် တွယ်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပါတယ်..
Ref: Funzug.com and John Edward’s Natural skin care from your kitchen
B) သဘာဝ သီးနှံများနဲ့ အသားအရည် ထိန်းသိမ်းနည်းးး
ကျန်းမာရေးနဲညီညွတ်ပြီး အသားအရေ တွေနူံးညံ့ပျော့ပြောင်း လှပစေဖို့ သဘာဝရဲ့ပေးစွမ်းတဲ့ အသီးအရွက်များနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ငွေမကုန်ပဲအလှပြင်ကြစေချင်လို့ ဖတ်မိမှတ်မိသမျှ အသားအရေ အမျိုးမျိုးအတွက် နည်းမျိုးစုံစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပုံတွေကိုသူငယ်ချင်းများအတွက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရမ်းပတ်တတ်တဲ့ ခြောက်သွေ့အသားအရေရှိသူတွေအတွက် ထောပတ်သီးနဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ လုပ်ရတာလည်း လွယ်တယ်နော်။ ထောပတ်သီးအသားကို ခက်ရင်းနဲ့ချေပြီး သံလွင်ဆီနည်းနည်း ရောမွှေလိုက်ပါ။ အနှစ်ပျစ်ပျစ်လေးရလာတဲ့အထိ ချေနော်။
ပြီးတော့မျက်နှာအနှံလိမ်း..နာရီဝက်နေရင် ရေဆေးချလိုက်ရုံပါပဲ။မျက်နှာလေးက နူးညံချောမွေ့
အသားအရေကို နူးညံ့စေတဲ့ ချောမွေ့စေတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေဖြည့်ပေးတဲ့ ငှက်ပျောသီးလေးရဲ့ အံ့ဖွယ်စွမ်းပကားကို အရမ်းကျေးဇူးတင်သွားမှာနော်။ဒီနည်းလမ်းတွေကို တစ်ပတ်ကို ၁ – ၂ ကြိမ်သာလုပ်သွားလိုက်ဆောင်းရာသီမှာအသားခြောက်၊အသားပတ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုပါ
ဖီကြမ်းငှက်ပျောသီးအခွံနဲ့ ပွတ်ပေးရင်ပါးပြီးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ …
– အမြှပ်ထအောင် ခေါက်ထားတဲ့ ကြက်ဥအကာကို ဆားဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာတွေပေါ်မှာ လိမ်းလိုက်ပြီး အပေါ်ကတစ်ရှုးလေးကပ်လိုက်ပါ။နာရီဝက်ဒါမှမဟုတ် ခြောက်သွားတဲ့အခါ ဖြေးဖြေးလေးဆွဲခွာပြီး
ရေနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ရင် Ok ပြီ။
(၂) ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံး၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်းနဲ့ လိမ္မော်ရည်စက်အနည်းငယ်ကို ရောမွှေလိုက်နော်။ သေသေချာချာကြေညက်သွားရင် ရလာတဲ့အနှစ်ကို မျက်နှာပေါ်မှာ ပါးပါးလေး သုတ်လိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ် လောက်ထားလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းလေးက မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ချွေးပေါက်တွေကိုလည်း သန့်စင်စေပါတယ်။
(၅) ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ အများကြီးပါတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးကို အခွံခွာ၊ အစိပ်သေးသေးလေးတွေ လှီးပြီး မွှေစက်ထဲ ထည့်ပြီး အနှစ်လေးရတဲ့အထိ မွှေပါ။ ပြီးရင် ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်းနဲ့ရောပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ ပါးပါးလေးလိမ်းပါ။ ၁၅ မိနစ် ပြည့်ရင်ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။
ချွေးပေါက်ကျဉ်းပြီး နူးညံ့ကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို တွေ့ရမှာပါ။
နောက်တစ်နည်းကလည်း ပန်းသီးနဲ့ ပျားရည်ပါပဲ။ ပန်းသီးတစ်ဝက်ကို အခွံခွာပြီး ရေနွေးထဲမှာ ခဏစိမ်လိုက်နော်။ ပြီးတော့ ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းရယ်၊ ဂျုံမှုန့် ၂ ဇွန်းရယ်နဲ့ ပေါင်းပြီး အနှစ်လေးရတဲ့အထိ ချေပါ။ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာ၁၀မိနစ်ထားပြီး ရေဆေးချလိုက်ပါ။
ချွေးပေါက်တွေကျယ်ပြီး ၀က်ခြံလည်းရှိတဲ့ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက်တော့ အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ နည်းလေးပါပဲ။
(၆) သခွားသီးကို အတုံးသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်အောင်တုံးပြီး ဒိန်ချဉ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ ဂျုံမှုန့် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးတစ်ခွက်စာနဲ့ မွှေစက်ထဲမှာ လုံးဝကြေညက်သွားတဲ့အထိ ထည့်မွှေပါ။ ပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ ၁၀ မိနစ်လိမ်းထားပြီး မျက်နှာသစ်လိုက်နော်။ ဒီနည်းက ချွေးပေါက်တွေကို သန့်စင်စေပြီး ၀က်ခြံတွေလည်း သက်သာစေပါတယ်။
သဘာဝ အသီးအနှံ တွေ အသုံးဝင်ပုံတွေအကြောင်း သိရှိသလောက် တင်ပြပေးပါဦးမယ်။သူငယ်ချင်းတို့တွေကလည်းပိုပိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းလေးတွေထူးခြားတာလေးတွေ
သိရင်လဲပိုပိုရဲ့ mail ကိုစာရေးလို့ပို့ပေးကြပါဦးနော်။ပိုပိုရဲ့mail လိပ်စာကတော့ popozaw@yahoo.com ဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းများရဲ့ကောင်းမူ့ဆိုးမူ့ဝေဖန်မူ့အကြံညံပေးတဲ့mailတွေကို
Posted by popozaw at 05:51
C) အသားအရည်ကောင်းစေဖို့ လွယ်ကူ နည်းလမ်းးးးများ
အသားအရည် လှပ ခြင်းက ရုပ်ရည် ချောမော လှပ ခြင်းထက် အများကြီး အများ ကြီး ပိုအရေး ပါပါတယ်နော်…
ရုပ်ချော ဖို့ဆိုတာ.. တချို့က ဘုရား ပေးတဲ့ ဆုရယ် လို့တောင် ပြောနေကြတော့… ကံတရား ပေါ် ဘယ်လောက်တောင် မူတည်တယ် ဆိုတာ… သိသာလွန်းတယ်..။
ဒါမဲ့ ခုများတော့လဲ ဆေးပညာ တွေ တိုးတက်မှု ကြောင့် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရင်း.. လိုတိုး ပို လျော့ လုပ်နိုင်လို့ လှပတဲ့ ရုပ်အဆင်းကို ပြုပြင် ယူနိုင်ကြပါပြီ။
ဆေးပညာ ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း… ရေရှည် ကျန်းမာ ရေးနဲ့ သင့်တော်ပြီး.. ပိုက်စံအကုန်အကျလည်း လဲ နည်းတဲ့.. ဘေးအန္ထရယ်လည်း ကင်းတဲ့ သဘာသ အတိုင်း အသားအရည် ထိန်းသိမ်း နည်းလောက်တော့ …. ဘယ် စိတ်ချ ရပါ့မလဲနော့… ဟုတ်ဖူးလား… ။
အသား ဖြူတာ မဲတာ ညိုတာ ကို မေ့ထားလိုက် ။
နှာ တံပေါ် လား မပေါ်လား ခေါက်ထားလိုက်…. မျက်နပေါက် ဆိုးလား ချော လား ၀ဲပလိုက်။
အဓိက က အသားအရည်လေး.. သန့် ရှင်း တင်းရင်း နေဖို့။
၀င်းပနေ ဖို့။ ကျန်းမာ တဲ့ အသားအရည် ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ပဲ.လေ..။
၁။ ဆန်ဆေးရည် နှင့် မျက်နှာသစ်ပါ။
ဆန် မှာ ပါတဲ့ ပရိုတင်း ဓါတ်က မျက်နှာကို အားဖြည့် ပေးတဲ့ နေရာမှာ တခြား ဆေးဝါးတွေထက် အဆ များစွာ ပို ထိရောက်နေလို့ပါ။ နေ့စဉ် မဆေး နိုင်ရင်တောင် တပတ်ကို ၂ ရက် ပုံမှန် ဆေးပေးယုံနဲပ လဲ ထိရောက် တဲ့ အစွမ်းကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်က မျက်နှာကို နုပျိုစေတယ်။ အရွယ် မတိုင်ခင် အိုမင်း ရင့်ရော် ခြင်းကို ကာကွယ်တယ်။ အရေးအကြောင်းတွေ ပျောက်ပြီး တင်းရင်းစေတယ်။
၂။ သခွား သီးနဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်ပါ။
တပတ်ကို ၂ ခါ လုပ် နိုင်ပါတယ်…။ သခွား စိတ်လေးတွေကို အအေးခံ ( ရေခဲသေတ္တာ ထဲ ၂ မိနစ်လောက် ထည့်)
ပြီးရင် မျက်နှာကို ဆပ်ပြာနဲ့ သန့်စင်အောင် ဆေးပြီး…
မျက်နှာ ရဲ့ ပါးပြင်၂ဖက်၊ နဖူး၊ မေးစေ့ နဲ့ မျက်စိ ၂ဖက်တို့ မှာ တင်ပြီး ၂၀ မိနစ်လောက်.. လဲလျောင်းနေလိုက်ပါ…။
သခွားသီးက အသားအရည်ကို တင်းရင်းစေတယ်။ မျက်စိကို အပူထွက်စေတယ်။ မိနစ် ၂၀လောက်အတွင်းမှာ.. စိတ်ကို ရှင်း နေအောင်ထားပြီး…. အသက်ရှု လေ့ကျင့်ခန်း (၀င်သက်ထွက်သက်ရှု သလို ) ကို လုပ်ပေးရင်း.. အသားအရည် အတွက် ပို အကျိုးဖြစ်သလို.. စိတ်ကို အနားပေးရာလဲ ရောက်ပါတယ်..။
ချွေးထွက်များ ခြင်းက ခန္ဒာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ အပူအပုတ်တွေကို သန့်စင်ပေးပါတယ်..။ ခန္ဒာကိုယ်ပူ လာတဲ့အခါ ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ကယ်လိုရီ တွေကို ကျွမ်းလောင်စေတဲ့ အတွက်… ၀ိတ်လျော့ ချင်တဲ့ မမ များ အတွက်လည်း.. တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပျက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
“အားကစား” လို့ ပြောလိုက်ရင်.. လူတော်တော်များများ စိတ်ထဲမှာ လေးသလိုလို ပင် သလိုလို ဖြစ်သွားလေ့ ရှိတတ်ပါတယ်..။ ဒါဟာ အလုပ်ကြီး တခုပဲ လို့ ထင်ချင် ထင်နိုင်ပါတယ်…။ အားကစား လုပ်တဲ့ ရုံတွေ သွားစရာ မလိုပဲ… အားကစား ရယ်လို့ တကူးတက မဟုတ်ပဲ.. နေ့စဉ် လုပ်နေကျ အလုပ်တွေထဲက… နေ ချွေးထွက်များ အောင် လေ့ကျင့်ရအောင်.။
a) လမ်းကို မြန်မြန် လျှောက်ပါ။
လှလှ ပြင်ပြီး ကျော့ကျော့ သွားရမဲ့ ခရီး မဟုတ်ရင်.. လမ်းကို မြန်မြန်လျှောက်ပါ။ ( ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တော့ မဟုတ်ဖူးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ခြေတလှမ်း ကုဋေ တစ်သန်းတန်မလို တော့ မလျှောက်ပါနဲ့။) လမ်းလျှောက်နေတဲ့ အချိန် သွေးလည်ပတ်မှု မြန်ဆန်ပြီး ခန္ဒာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးစီကို သွေးစီးဆင်းမှု မှန်ကန် စေပါတယ်..။
b) အ်ိမ်က ၂ထပ် အိ် မ် မို့လို့ လှေကားတွေ ဘာတွေ ရှိရင်.. တနေ့ကို (လှေကား အဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး) အနည်းဆုံး ၆ ခေါက် လောက် အတက်အဆင်း လုပ်ပေးပါ။
လှေကားကို တက်တဲ့ ဆင်းတဲ့ အခါ ခြေထောက်ကို ကွေးညွတ် ထားရတယ် ပြီး ပြန် ဆန့်ထုတ်ရတယ်။ (စက်ဘီးစီးသလို) အဲ့ဒိအတွက် ကြွက်သားကို တင်းရင်းစေတယ် ( ခြေသလုံးကြီးလာခြင်း မဟုတ်ပါ။)
c ) joking ခုန်ပါ။ ပြေးသလိုမျိုး နေရာမရွေ့ပဲ.. တနေရာထဲမှာပဲ ခြေထောက်ကို အသုံးပြုပြီး ခုန်ပေးပါ။ ( စုံ ခုန်တာ မဟုတ်ဖူးနော်..ပြေးနေသလို)
d) စက်ဘီးကို ပုံမှန် စီးပေးပါ။
၄။ အိပ်ရေး ၀၀ အိပ်ပါ။
အိပ်ရေး မ၀ရင် မျက်နှာ အသားအရည်က ညစ်ပတ်နေတတ်တယ်။
အချိန်မှန် အိပ် အချိန်မှန် ထ ပါ။
၅။ ဘဲဥ၊ ကြက်ဥနဲ့ ပေါင်းတင်ပါ။
ဒါကတော့ ပေါင်းတင်နည်းတွေမှာ အလွယ် ဆုံး နဲ့ ထိရောက်တဲ့ နည်းပါပဲ။
အကာ နဲ့ အနှစ်ကို ခွဲ ထည့်ပါ။
မျက်နှာကို စင်အောင် ဆပ်ပြာနဲ့သစ်ပါ။
ပထမ တစ်ကြိမ် အကာကို အသုံးပြုပါ။
အကာကို ခရင်းနဲ့ အမြှုပ် ထွက်လာသည် အထိ ခေါက် ပေးပါ။
သန့်စင်သည့် မျက်နှာပေါ်တွင် ( မျက်နုံးတ၀ိုက် ဖယ် ရှားပြီး ) သုတ်လိမ်းလိုက်ပါ။
ခြောက်ပြီး တင်းလာသည် အထိစောင့်ပါ။ ( အနေတော် လေး တင်းတယ်ဆို လုံလောက်ပါပြီ )
ပြီးလျှင်..ေ၇းအေးနှင့် ဆေး လိုက်ပါ။
ဒုတိယ အကြိမ် အနှစ်ကို အသုံးပြုပါ။
လက်သည်းခွံလောက် ပမာဏ အနှစ်ကို ယူလိုက်ပါ။
မျက်လုံး တ၀ိုက် ဖယ်ပြီး မျက်နှာကို သုတ်လိမ်းလိုက်ပါ။
ခြောက်သညိ အထိထားပြီး မှ ရေဆေး လိုက်ပါ။
တပတ်ကို တစ်ကြိမ် ထက် ပို မလုပ်သင့်ပါ။
ပေါင်းတင်နေသည့် အချိန်တွင် ရယ် ခြင်း ပြုံးခြင်း မလုပ်ရပါ။ ( အရေးအကြောင်း ပေါ်တတ်သည်.)
၆။ ရေကို တနေ့ အနည်းဆုံး တစ်လီတာ သောက်ပါ။ ၂လီတာ သာမန်ပါ။
ရေထက်ကောင်းတဲ့ ဆေးကတော့ မရှိ။
၇။ ရောင်စုံ အသီးအရွက် များများ စားပါ။
မုန်လာဥ နီက မျက်လုံးအားတောင် ကောင်းတယ်နော်။
ကဲ.. ဒါတွေကတော့.. လုပ်ဖို့ လည်း ခက်ခဲမယ် မထင်ပါဘူး….။ တကယ်လည်း ထိရောက်တဲ့ နည်းကောင်းလေးတွေ မို့လို့.. မိန်းခလေးတိုင်း.. လုပ် နိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။။
အားလုံးပဲ အဆင်းရော အချင်းပါ လှနိုင်ပါစေ။
D) ပေါင်းတင်ခြင်း (၁)
E) ပေါင်းတင်ခြင်း (၂)
မျက်နှာပေါင်းတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ သင်၏ အသားအရေ ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်သာ မဟုတ်ပဲ သင်၏ စိတ်ချမ်းမြေ့ စေရန် အနားပေးသော အချိန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါ ညွှန်ကြားချက်များဖြင့် သင်၏ အသားအရေ ချောမွတ် စေရန် သင့်အိမ်တွင် ရှိပြီးသား အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်သော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပေါင်းတင်နိုင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံး အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေရန်အတွက် သင်၏ မျက်နှာကို သန့် စင်စေပြီး အစိုဓာတ် ရှိအောင် ပြုလုပ် ထားပါ။ အစိုဓာတ်ခံလိမ်းဆေးကို လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သင်၏ မျက်နှာ အသားအရေကို ချောမွတ်၍ ကျန်းမာစေပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ၀က်ခြံနှင့် ကြမ်းတမ်းသော အရေပြား ဖြစ်နိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများကို လျှော့ချ ပေးပါသည်။
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ငှက်ပျောသီးတစ်ဝက်ကို ခက်ရင်းဖြင့် ချေပြီး ဒိန်ချဉ် လက်ဘက် ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း ထည့်ကာ သမအောင် ရောမွှေပါ။ ၄င်းတို့ ကို သေချာနှံ့ စပ်စွာ မွှေပြီးမှသာ ပျားရည် လက်ဖက်ရည် ဇွန်း ၁ဇွန်း ထပ်ရောပြီး သမအောင် မွှေပါ။
သမစွာ ရောမွှေထားသော ၄င်းအနှစ်များကို မျက်နှာပေါ်တွင် ညီညာစွာ သုတ်လိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ် ၂၀ ခန့် ထားပါ။ ပြီးလျှင် ရေအေးဖြင့် ဆေးကြောပါ။ နူးညံ့ပြီး သန့် ရှင်းသော အ၀တ်စဖြင့် မျက်နှာပေါ်တွင် တင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်များကို ဖယ်ရှားပေးပါ။ အေး၍ သန့် စင် သောလေဖြင့် ထပ်မံ ဆေးကြောပေးပါ။
Credit to- Original Uploader
F) ဝက်ခြံကင်းသော အသားအရေဖြစ်ဖို့
G) ပျိုမေတို့အတွက် ပျားရည်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ
၁။ ပျိုမေတို့ရဲ့ ချိုင်းသားလေးတွေ လှပ သန့်ရှင်းချောမွေ့စေဖို့ လျှို့ဝှက်ချက် ကတော့ ပျားရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချိုင်းအောက်အရေပြားကို ပျားရည် (သို့မဟုတ်) ပျားရည်နဲ့ သံပုရာသီးရောပြီး တစ်လ တစ်ကြိမ်လောက် ပုံမှန်လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ သံပုရာသီးကတော့ ချိုင်းအောက် အရေပြားမည်းနေသူတွေ အတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရေချိုး ခါနီးတိုင်း သံပုရာသီးနဲ့ ချိုင်းအောက်က မည်းတဲ့နေရာတွေကို ညင်ညင်သာသာ ပွတ်တိုတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၂။ ဦးရေပြားက အဆီခန်းခြောက်လို့ ဆံပင်တွေခြောက်ပြီးပွယောင်းယောင်း ဖြစ်နေသူတွေ အတွက် ပျားရည်နဲ့ နွားနို့ဟာ အကောင်းဆုံး ဗီတာမင်ပါပဲ။ နွားနို့ဖန်ခွက်နဲ့ တစ်ဝက်ခန့်ကို ပျားရည် လက်ဖက်ရည် ဇွန်းတစ်ဇွန်းနဲ့ ရောစပ်ပြီး ဆံနွယ်ဆံသားတွေကို နှံ့စပ်အောင် ပွတ်လိမ်းရပါမယ်။ ၁၀ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပြီး ခေါင်းလျှော်ရည် ပျော့ပျော့လေးနဲ့ လျှော်ပြီးချိန်မှာတော့ ဆံနွယ်ဆံသားလေးတွေသိသိသာသာ ပျော့ပျောင်းနူးညံ့လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သင့်မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်း တစ်ဝိုက်က အသားအရေ နူးညံ့ချောမွေ့စေဖို့ ပျားရည်က အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်ပါပဲ။ ငှက်ပျောသီး မှည့်မှည့်တစ်လုံးနဲ့ ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာကို သမအောင် ရောမွှေပြီး မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းကို ခပ်ပါးပါးလေးလိမ်းပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပြီး မျက်နှာသစ်ဆေး ခပ်ပျော့ပျော့နဲ့ ဆေးကြောလိုက်ချိန်မှာတော့ သင့်ရဲ့ အသားအရေဟာ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေလို နူးညံ့ချောမွေ့ သွား မှာ သေချာပါတယ်။ မနက်အိပ်ရာထချိန်မှာလည်း ပျားရည်စစ်စစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်လောက်ကို မျက်နှာမှာ လိမ်းထားပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာရင် ရေခပ်နွေးနွေးလေးနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်လို့လည်း ရပါသေးတယ်။ မနက်အိပ်ရာထချိန်မှာလည်း ပျားရည်နဲ့ မျက်နှာ သစ်ခြင်း အားဖြင့် နူးညံ့ချောမွတ်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Post by : Villager Myanmar
Re-Post By ACM 8-4-2013
အေးချမ်းမွန် Credit & Copy From > Villager Myanmar<< Thank
H) ထမင်းရည် အသုံးဝင်ပုံ
(ဦးနွေဦး ကျေးဇူးနဲ့ ဖဘက တွေ့လို့)
ချစ်သူက ကိုယ့်မက်နှာကြီး ကိုက်စားမိရင်
အနော်မပါဘူးနော်။ လုံမလေးကို ပြောပါ။
ပိုလှလာတယ်ဆိုရင်တော့ အနော့ကို မုန့်ကျွေးကြပါ။ အဟိ!!
အသားအရေ ထိမ်းသိမ်းဖို့အတွက် အသီးအနှံဒွေ ၀ယ်ထားဖူးပါတယ် ဆွိရယ်….
စားလိုက်ရင်များ ပိုလှလာမလားဆိုပီး.. စားလိုက်မိတာများလို့ ညက်နှာပေါ်တင်ခန်း တစ်ခါမှ မရောက်ပါဝူး..
အရွယ်အိုမင်းတာ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကြောင့် ထိခိုက်တာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း အချက် တွေကြောင့် ရရှိလာတဲ့ ဓာတ်တိုးပစ်္စည်းတွေကအသားအရေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသက်ကြီးလာပေမဲ့ အသား အရေတောက်ပမြဲ တောက် ပနေအောင် မိခင် တွေ ထိန်းသိမ်း သင့်တဲ့ သဘာဝအသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) သင်္ဘောသီး… သင်္ဘောသီးမှာ ကယ်ရိုတင်း၊ ဗီတာမင်စီ၊ မရှိမဖြစ်သတ်္တုဓာတ် နဲ့ ပက်ပိန်းအင်ဇိုင်း ပါဝင်မှုများတာကြောင့် သဘာဝအသားအရေ ချောမွေ့စေတဲ့ အစိုဓာတ် ထိန်းခရင်မ် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောသီးကို ပါးပါး လှီးပြီး ပုံမှန်လိမ်းပေးတာက အသားအရေ ကို တောက်ပစေပြီး သက်ကြီးအစက် အပြောက်တွေကို လျော့ကျစေ ပါတယ်။ သင်္ဘောသီးဟာ ချွေး ပေါက်ပိတ်ဆို့တာကို ပွင့်စေတာကြောင့် လည်း အရေပြားကို နူးညံ့ပြီး ချောမွေ့တောက်ပစေပါ တယ်။
ဘယ်လိုလိမ်းသင့်သလဲ… သင်္ဘောသီးက အသုံးပြုရလွယ်ပါတယ်။ သင်္ဘောသီးအနှစ်ကို ကြေညက်အောင် ချေပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို စက် ၀ိုင်းပုံစံလှည့်ပြီး တိုက်ရိုက်လိမ်းပေးပါ။ လိမ်းတဲ့ အခါ နည်းနည်းပဲ ကုန်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကျန် တဲ့သင်္ဘောသီးကို စားပေးနိုင်ပါတယ်။ အမျှင် ဓာတ်၊ ပိုတက်စီယမ်နဲ့ ဗီတာမင်အေ၊ စီတို့ ပါဝင်တာကြောင့် အကျိုးရှိပါတယ်။
(၂) ထောပတ်သီး… အသားအရေ နူးညံ့ ချောမွတ်နေစေဖို့အတွက် ဗီတာမင်တွေ လိုအပ် နေပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ ဗီတာမင်အေ၊ ဘီ၊ ဒီနဲ့ အီးတွေ ပါဝင်မှုများပါတယ်။ ငှက်ပျော သီးတစ်လုံးမှာထက် ပိုတက်စီယမ် ပါဝင်မှုပို များပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အဆီတွေ ပါတာကြောင့် သဘာဝ အစိုဓာတ် ထိန်းပစ္စည်း အဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးဟာ အရေး ကြောင်းတွေထင်တာနဲ့ ပါးရေတွန့်တာတွေလို အိုမင်းတဲ့ လက်္ခဏာတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ထောပတ်သီးမှာပါတဲ့ သဘာဝ အဆီဓာတ်က မျက်နှာပြင် အညစ်အကြေးတွေကို ကင်းဝေး စေပြီး နှင်းခူ၊ အနီရောင်အစက်အပြောက်နဲ့ ထိလွယ်ခိုက် လွယ်တဲ့ အသားအရေအတွက် အ ကောင်းဆုံးကုသနည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေ စဉ်းစားပြီး
ရေးပေးပါလား အန်တီကေဇက်ရယ် ၊
အမျိုးသားတို့အတွက် အခြေခံ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းများ
( အစိုဓာတ် ထိန်းခရင်မ် ) ( ရေနံဂျယ်လီ )
( သဘာဝ အအေးခရင်မ် ) ( ဂလစ်ဆရင်းနှင်းဆီရေ )
အမယ်လေးဗျာ ၊ ငါ မသိတာတွေချည်းပဲ ၊
ပို လှလာလို့ …
ကြိုက်သူ များလာလို့ …
ကျော့်ကို စွန့်သွားရင်တော့ …
ပတ်သနာ ရှာမှာနော် ….
သခွားသီးဟာ စားသုံးလို့ ကောင်းတဲ့ အသီးတစ်မျိုး ဖြစ်သလို အသားအရေ ကောင်းမွန်ဖို့ အတွက်လည်း အထောက် အကူပေးတဲ့ အသီး တစ်မျိုးပါ။ သခွားသီးမှာ Vitamin A.B.C နဲ့ ရေဓာတ် များစွာ ပါဝင်တာမို့ ပါးပါးလေး လှီးထားတဲ့ သခွားသီး လေးတွေကို မျက်နှာပြင် အနှံ့ ကပ်ပေးရင် အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး မျက်နှာလည်း ကြည်လင် စေပါတယ်။ သဘာဝတရားက ပေးစွမ်းတဲ့ ပေါင်းတင်ဆေး ဖြစ်တာမို့ တစ်ကိုသာ အသုံးပြု ချင်တဲ့ ပျိုမေတွေ အတွက် သဘာဝ ပေါင်းတင်ဆေး တစ်မျိုးပါ။ ကြိုက်နှစ်သက် သူများ ပြုလုပ် ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ သခွားသီးကို စားသုံးခြင်းဖြင့် အစာချက်(Diet ) တဲ့ နေရာမှာလည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ သခွားသီးဟာ အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသီးတစ်မျိုး ဖြစ်တာမို့ စားသုံးပေးရင် ဆီးကိုလည်း ရွှင်စေပြီး မိမိ အသားအရေ အတွက်လည်း အသုံးတည့်တဲ့ သခွားသီးကို ပုံမှန်လေး စားသုံး ပေးပါလို့ တိုက်တွန်းစကား ဆိုပါရစေ။ ။
နီ့ ကို မွန်မွန် စွန့် သွားရင်…
ဒေါ်ဖွားမေဂျီးနဲ့နီ့ ကို စီစဉ်ပေးမယ်တွာ…
ယောင်္ကျားဈေး မကျစေနဲ့ ၊
ကိုမိုက်တို့ အဘဖောတို့ ကိုဘလက်တို့ကို ဆရာတင်လိုက်ကွာ ၊
မွန်မွန်လေးထားသွားရင် နိကို သခွားသီးနဲ့နေခဲ့တဲ့ ဆွိပေါနေဒယ်… အံချာ
တကယ် တကယ် သာမီးက အဲ့ဒါတွေအရမ်းသဘောကျတာ။ ပရင့်ထုတ်ပီး သိမ်းမယ်။ လုပ်ကြည့်မယ်
ထားသွားပါဝူးနော်။ ပိုချစ်အောင်လို့ပါ ဟိဟိ
ဆံပင် အဖျားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်း ကင်းစေရန် ဆံပင်သားကို အရောင်ဆိုးဆေး၊ အရောင်ချွတ်ဆေး၊ ဆံပင် လိမ်းဂျဲလ်၊ ဆံပင်ဖျန်းစပရေးနဲ့ ဆံပင်လေမှုတ်စက် စတာတွေ ထိတွေ့မှုကြောင့် ဆံပင်သား ခြောက်သွေ့ပျက်စီးမှု ဖြစ်စေရုံ သာမက ဆံပင်အဖျား နှစ်ခွကွဲတာကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုကိုအံ ကို ပိုဂျစ်ပါ့မယ်တဲ့။
ခ ခွေးနဲ့ မဟုတ်ပဲ ဂ ငယ်နဲ့နော်။
တကယ့်ကို ပြည့်စုံလှချည်လား ကေဇီရေ့။ မမှတ်နိုင်တော့လို့ ကူးပဲသွားတော့တယ်။ ကျေးကျေးပါ။ သားလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ပါမွယ် ချွေးမလေးရေ
သဘာဝဖြစ် ပစ္စည်းတွေနဲ့ အသားဖြူအောင် လုပ်တဲ့နည်းတွေ အရင်ဖော်ပြသွားပါမယ်။ ကရိကထလည်း မများ၊ ဈေးလည်း မကုန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ အများသူငါ လက်လှမ်းမီ သုံးလို့ရတာတွေကို ဦးစားပေး တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိမ္မော်သီးအခွံကို နေပူထဲ လှမ်းပေးပါ။ လုံးလုံးခြောက်သွေ့သွားတဲ့ အချိန်မှာ ကြိတ်ပြီး ပေါင်ဒါလို အမုန့်ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပါ။ ပြီးမှ နို့အစိမ်းနဲ့ ရောပြီး ပျစ်ခဲနေအောင် ဖျော်ပါ။ အဲဒီ့အရည်ကို အရေပြားကို လိမ်းပါ။ နေ့စဉ် လိမ်းပေးပါ။ လိမ်းပြီးသွားလို့ အရေပြားပေါ် လုံးလုံး ခြောက်သွေ့သွားတဲ့ အချိန်ကျရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။
ခရမ်းချဉ်သီး ၂-၃ လုံးလောက်ကို ကြိတ်ပြီး အရည်ညှစ်ချပါ။ အဲဒီ့ အရည်ထဲကို သံပရာရည် တစ်စက် နှစ်စက်ထည့်ပြီး မျက်နှာကို လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် နှစ်ဆယ်လောက် အခြောက်ထားပြီးမှ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ် လုပ်ပေးပါ။ ၁၅ ရက်ကနေ ရက် ၂၀ အတွင်း သိသာထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။
အမဲကွက်နဲ့ အစက်အပြောက်တွေ ပျောက်ဆေး
အာလူးအစိမ်းတစ်လုံးကို ယူပြီး ပါးပါးလှီးပါ။ လှီးထားတဲ့ အစိတ်လေးတွေကို မျက်နှာပေါ် ကပ်ပေးပါ။ မျက်နှာပေါ်က မှဲ့ခြောက်တွေ။ တခြားအမဲကွက်တွေကို ပျောက်စေပါတယ်။
နေပူလောင် ခံထားရတဲ့ အသားရေများအတွက် နနွင်းမှုန့်နဲ့ သံပုရာရည် ရောပြီး လိမ်းပေးပါ။ နေလောင်ဒဏ်ခံရတဲ့ အသားရေတွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။
နနွင်းကို တခြားအမယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရောစပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ နနွင်းဟာ အသားရေ ဖြူဝင်းလှပဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရာထဲ မဝင်ခင် တစ်နာရီ အလိုမှာ နွားနို့နွေးနွေး တစ်ဖန်ခွက်ထဲကို နနွင်းမှုန့် ဇွန်းဝက်ခန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) ရောစပ်ပေးပါ။ အချိုကြိုက်ရင် သကြား အနည်းငယ် ထည့်ပေးပါ။ ဒါပေမဲ့ သကြားနည်းလေ ပိုကောင်းလေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကို လအနည်းငယ်ခန့်လောက် သောက်သုံးပေးတာနဲ့ သိသာထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီလို ကာလမျိုးမှာတော့ ဒီနည်းကို အသုံးမပြုပါနဲ့။ နနွင်းဟာ ကိုယ်တွင်းအပူချိန်ကို မြှင့်တင်ပေးတာမို့ အေးမြတဲ့ အချိန်တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အချိန်တွေမှာတော့ စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အိမ်တွင်းဖြစ် အသားဖြူ Lotion
သခွားသီးအရည် (စားပွဲတင်ဇွန်း) တစ်ဇွန်းထဲကို သံပရာရည် တစ်စက် နှစ်စက်ရောပေးပါ။ သမအောင်ရောပြီးသွားရင် အဲဒီ့အရည်ကို မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကို လိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်လောက် အခြောက်ခံပြီးသွားရင် မပူမအေး ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ဆေးကြော သန့်စင်ပေးပါ။ ပျိုတို့ရဲ့ အသားရေဟာ အရင်ကထက် ပိုပြီး တောက်ပြောင်ရွန်းလဲ့ လာပါလိမ့်မယ်။
အိမ်တွင်းဖြစ် Facial Mask
ပျားရည်တစ်ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)၊ သင်္ဘောသီး အရည်တစ်ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)တို့ရောပြီး လိမ်းပေးပါ။ ၁၅ မိနစ် ခန့်စောင့်ပြီးမှ ရေနဲ့ ပြန်ဆေးကြောပေးပါ။
အသားဖြူချင်တဲ့သူတွေ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ Whitening Product များ ဝယ်ရတာကအစ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။
ပျိုတို့အနေနဲ့ Whitening Product တွေ ဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့ အခါမှာ မဝယ်ခင် ကိုယ့်အသားအရေရဲ့ အမျိုးအစားကို သိပြီးမှ အသားအရေ အမျိုးအစား အလိုက် ရွေးချယ်ဝယ်ယူသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ တချို့အသားဖြူ အလှကုန်တွေဟာ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ၊ ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေ အမျိုးအစားတွေနဲ့ သင့်တော်ခြင်း မရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ပူစပ်တဲ့ အစားအစာများ၊ ဆီကြော်အစားအစာများကိုလည်း မစားပါနဲ့။ ဒီအစားအစာတွေဟာ အရေပြားပေါ်က ရေဓာတ်ခြောက်ခမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အရေပြားကို ခြောက်သွေ့မည်းကွက် လာစေပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ Whitening Product သုံးသုံး၊ အသားဖြူဆေး သုံးသုံး ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မလုပ်လို့ကတော့ အကျိုးထိရောက်မှု မရှိပါဘူး။ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းကို နေ့စဉ်မှန်မှန် ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ သွေးလေလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်ပြီး အသားထဲ ဆေးစိမ့်ဝင်မှု ပိုမိုမြန်ဆန်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသားဖြူချင်သူများအတွက်နည်းလမ်းများ – Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/profiles/blogs/
ကျေးကျေးပါချွေးမွလေးရေ။ အမလဲ မျက်နှာမယ် အမဲကွက်ကလေးပေါ်နေတာ အာလူးနဲ့လုပ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်။
ကွန်းမန့်လေးတော့ ၀င်ရေးချင်စိတ် ဖြစ်နေတာကြောင့်…
ဆက်လုပ်ပါ မခိုင်ဇာ လို့ပဲ ပြောခဲ့ပါရစေဗျာ…။
ဘာဆက်လုပ်ရမှာတုန်းးးး ဒီလူဂျီး မရှင်းမရှင်းနဲ့။
အသားဖြူချင် သူတွေအနေနဲ့ အသားဖြူဖွေး လှပစေဖို့ ဆိုပြီး အသားအရေ ထိန်းပစ္စည်းတွေ၊ မိတ်ကပ်တွေကို အစုံ အသုံးပြု ကြပါတယ်။ တချို့ အသားအရေ ထိန်းပစ္စည်းတွေနဲ့ မိတ်ကပ်တွေက အသားဖြူစေတယ် ဆိုပေမယ့် ဓာတုပစ္စည်း တွေကြောင့် ဆိုးကျိုးတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သဘာဝနည်းနဲ့ အသားဖြူစေမယ့် နည်းတွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
အရေပြားကို ပုံမှန် ကြေးချွတ်ပါ
အရေပြားကို ကြေးချွတ်တာက အရေပြားရဲ့ အပြင်ဘက်ဆုံး အလွှာက ဆဲလ်သေတွေကို ကွာကျစေပြီး အသားအရေကို တောက်ပ စေပါတယ်။ အရေပြား ဆဲလ်ဟောင်းတွေက ကီရာတင် (Keratin) တွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့ အခါမှာ ဆဲလ်သေအလွှာက စုပုံနေပြီး အရေပြားမှာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အလွှာတစ်လွှာ ဖြစ်လာကာ အရေပြား ညစ်နွမ်းတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆဲလ်တွေက အရေပြားရဲ့ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှာလည်း အရေးပါ နေတဲ့အတွက် အလွန်အမင်း ကြေးချွတ်တာမျိုးကိုလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အိမ်လုပ် သဘာဝ ကြေးချွတ်ပစ္စည်းနဲ့ ကြေးချွတ်ပေးတာက အရေပြား ကျန်းမာတောက်ပစေတဲ့ နည်းလမ်းကောင်း တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သဘာဝကျတဲ့ ကြေးချွတ်ပစ္စည်းတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) သကြားနဲ့ သြဂဲနစ် အဆီစစ်စစ်တို့ကို ရောပြီး အရေပြားကို လိမ်းကာ ကြေးချွတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆား၊ ကော်ဖီစေ့မှုန့်နဲ့ သြဂဲနစ်အဆီတို့ကို ရောပြီး ကြေးချွတ်တဲ့ နည်းကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကို သုံးဖို့ အဆင်မပြေသူတွေ အတွက် ဒုတိယနည်းကို သုံးပါ။
(၂) ဆော်ဒါမှုန့်ကို ရေနဲ့ရောပြီး မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကို ချန်ကာ မျက်နှာ တစ်ပြင်လုံးအနှံ့ လိမ်းပြီး ကြေးချွတ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ကြေးချွတ်ပေးတာကို တစ်ကိုယ်လုံး အနှံ့ ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အခါ လက်မောင်း၊ တံတောင်ဆစ်၊ ခြေချင်းဝတ်၊ ခြေဖနောင့်နဲ့ ခြေထောက်နေရာရှိ အရေပြား ဆဲလ်သေတွေကိုပါ ကင်းဝေးစေပါတယ်။
အသားဖြူစေသော ပေါင်းတင်ပစ္စည်း သုံးပါ
အသားဖြူစေတဲ့ ပေါင်းတင် ပစ္စည်းကို သုံးပြီး တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ခန့် ပေါင်းတင်ပေးရင် မျက်နှာကို တောက်ပစေပါတယ်။
(၁) အပျော့စား ဆပ်ပြာသုံးကာ မျက်နှာသစ်ပါ
သင်္ဘောသီး (Papaya) နဲ့ အနက်ရောင်နွယ်ချို (Black Licorice) စတာတွေလို သဘာဝအသားဖြူစေတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပါတဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။
(၂) အရေပြားကို စိုစွတ်နေအောင် ထားပါ
တချို့ အသားဖြူစေတဲ့ အလှကုန် ပစ္စည်းတွေက သဘာဝ ကျပေမယ့် အရေပြားကို ခြောက်သွေ့စေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေပြားကို ဗီတာမင်အီး အဆီနဲ့ ရှားစောင်းလက်ပပ် လိမ်းပြီး စိုပြည်နေအောင် ထားပါ။ အရေပြား ပြဿနာများအတွက် အမျိုးသမီး အများစုဟာ အသားအရေကို တောက်ပစေဖို့ထက် အရေပြား ပြဿနာတွေ ကင်းဝေးဖို့ကို ပိုလိုလားကြပါတယ်။ ဝက်ခြံကြောင့် အမာရွတ်ဖြစ်တာ၊ နေဒဏ်ကြောင့် အရေပြား ပျက်စီးထိခိုက်တာနဲ့ သက်ကြီး အစက်အပြောက် ဖြစ်တာတွေ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် ဒီလို အရေပြား ပြဿနာတွေ ကင်းအောင် အောက်ပါနည်းတွေကို လိုက်နာပေးပါ။
(၁) သံပရာရည်၊ ရှောက်ရည်
သံပရာရည်၊ ရှောက်ရည်က သက်ကြီး အစက်အပြောက်တွေနဲ့ တင်းတိပ်တွေ ကင်းစေဖို့အတွက် ကျော်ကြားတဲ့ ရိုးရာပစ္စည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သံပရာရည်၊ ရှောက်ရည်က အရေပြားကို ယာယီ အရောင်ကျွတ်စေပါတယ်။ စစ်ထရစ်အက်စစ် ပါဝင်လို့ပါ။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ညှစ်ထားတဲ့ သံပရာရည်ကို စိုစွတ်တဲ့ ပိတ်စထဲ ထည့်ပြီး အရေပြားပေါ်က အစက်အပြောက်တွေပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။ မခြောက်သေးဘဲ နေရောင်ထဲ မသွားပါနဲ့။ သံပုရာရည်၊ ရှောက်ရည်ကို မျက်လုံးနဲ့ ပြတ်ရှရာတွေထဲ မဝင်ပါစေနဲ့။
နို့ထဲမှာ ပါတဲ့ လက်တစ်အက်စစ်က အရေပြားကို ကြေးချွတ် သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ ရှိပါတယ်။ နို့ထဲမှာပါတဲ့ အဆီက အရေပြားကို အေးမြစေပါတယ်။ အရေပြား ချောမွတ်အောင် မျက်နှာကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ခန့် နို့နဲ့ ဆေးကြောပြီးမှ ကြက်သီးနွေး ရေနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ အရေပြား တောက်ပပြီး အမည်းစက်တွေ ကင်းအောင် ရှားစောင်းလက်ပပ်၊ ရှလကာရည်၊ ကြက်ဆူဆီတို့ကိုလည်း လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများဖြင့် အသားဖြူအောင် ပေါင်းတင်နည်း
မီးဖိုချောင်ထဲကရတဲ့ ပစ္စည်းတွေသုံးပြီး မျက်နှာကို ပေါင်းတင် ပေးနိုင်ပါတယ်။
နွားနို့၊ သံပရာရည်ဖြင့် ပေါင်းတင်နည်း
ဂျုံမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ နွားနို့ ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်းနဲ့ သံပရာရည် အစက်နှစ်စက်တို့ကို ရောပြီး မျက်နှာကို လိမ်းပါ။ အချိန် ၁၅ မိနစ်ကြာမှ ရေနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ လေးပတ်ကြာတဲ့ အထိ နေ့စဉ် ပေါင်းတင်ပေးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ပေါင်းတင် ပေးနိုင်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီး၊ သံပရာရည်ဖြင့် ပေါင်းတင်နည်း
ကြိတ်ခြေထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး တစ်လုံးကို သံပရာရည် နှစ်စက်- သုံးစက် ရောထည့်ပြီး မွှေကာ မျက်နှာပေါ် လိမ်းပါ။ မိနစ် ၂၀ ကြာမှ ရေနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ ဒီနည်းကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပြီး ၁၅-၂၀ ရက် ကြာတဲ့အခါ သိသာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဂျုံမှုန့် နှင့် ခရမ်းချဉ်သီးဖြင့် ပေါင်းတင်နည်း
ဂျုံမှုန့်၊ ဒိန်ခဲနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး အရည်တို့ကို ရောပြီး မျက်နှာပေါ် လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာမှ ရေအေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ အရေပြားပေါ်က နေလောင်ဒဏ်ရာတွေကို ကင်းစင်စေပြီး အသားအရေကို တောက်ပစေပါတယ်။
အသားအရေ ဖြူဝင်းလှပစေမည့် နေထိုင်မှုပုံစံ
စားတဲ့ အစားအသောက်နဲ့ အနေအထိုင်တွေကလည်း အသားအရေ လှပမှုအပေါ် မူတည်နေပါတယ်။
ရေက ခန္ဓာကိုယ်တွင်း စနစ်ထဲက အဆိပ်တွေကို ကင်းစေတာကြောင့် အသားအရေ ကြည်လင်စေပါတယ်။ ရေကို လုံလုံလောက်လောက် သောက်တာက အသားအရေကို တောက်ပ ကျန်းမာစေပါတယ်။
သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားပါ
နေ့စဉ် အစားအစာထဲမှာ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများပါအောင် ထည့်စားပါ။ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေထဲမှာ ပါတဲ့ အင်တီ အောက်ဆီးဒင့်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသားအရေကို နုပျို ကျန်းမာစေပါတယ်။
နေရောင်ခြည် အောက်မှာ သိပ်မနေပါနှင့်
နေရောင်ခြည်ထဲမှာ နေတာကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့သင့်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်နဲ့ လုံးဝ မထိတွေ့ရဘူး လို့လည်း မဆိုလိုပါဘူး။ နေရောင်ခြည်ကနေ အရေးကြီးတဲ့ ဗီတာမင်ဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင်ဒီကို ရရှိနိုင်လို့ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးချိန်မှာ ထွက်လာတဲ့ ချွေးကနေ တစ်ဆင့် အဆိပ်တွေ ထွက်သွားပါတယ်။ ချွေးထွက်တာက သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ကောင်းစေပြီး အရေပြားဆီက အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ရောက်ရှိစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းက တစ်နေ့တာရဲ့ အလေ့အထ တစ်ရပ်လို သဘောထားပေးပါ။
တစ်ညကို အိပ်ချိန် အနည်းဆုံး ခုနစ်နာရီလောက် မရှိရင် သင့်အနေနဲ့ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်နေတဲ့ ပုံပေါ်နေနိုင်ပြီး အသားအရေလည်း နွမ်းနယ် နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက် အနားယူပါ။
Credit to ဇွန်ခိုင်ဦး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်)
ပရင့်ထုတ်ပီး သမော်ဒီးကိုပေးဖတ်လိုက်မယ် ကြံမိတယ်
ပြန်စဉ်းစားတော့မှ အင်း…သစ်သီးဖိုးတွေ နာ့ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ဂျတော့မှာပဲ
ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရေ ချောက်သွေ့နေတဲ့သူတွေနဲ့ မျက်နှာအသားအရေ ကြမ်းနေတဲ့ သူတွေ အတွက် အဆင် ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတချိုပါ။ အခုလို ဆောင်းရာသီရောက်တဲ့အတွက် မျက်နှာ အရေပြားခြောက်သွေ့တဲ့ သူ တွေအတွက် အသားအရည်စိုပြေ နုပျိုသွားစေဖို့အတွက် ပေါင်းတင်နိုင်တဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတွေပါ။
ဓာတု ဖန်တီးချက်တွေမပါတဲ့ အသီးအနှံတွေနဲ့ ပေါင်းတင်ပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ့် မျက်နှာအသားအရေနဲ့ မတည့် မှာကိုလည်း စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ မျက်နှာအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ အထက်ပါ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း ၂ ခုကတော့ ဆောင်းရာသီမှာ ကြုံ တွေ့နေရတဲ့ အသားအရေ ခြောက်သွေ့ ကြမ်းနေတဲ့သူတွေအတွက် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးပါ။
မျက်နှာ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ ကိုယ့်လက်ကလေးနဲ့ မျက်နှာက အကြောတွေကို အသာ အယာနှိပ်နယ်ပေး ခြင်းဖြင့်လည်း မျက်နှာကြောတွေ ပြေလျော့ပြီး နုပျိုမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ပျိုမေတို့တွေ လွယ်ကူစွာနဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိန်းနိုင်ပြီး လှပစေဖို့ ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit to အိမ့်သံစဉ်
ကျောက်စ်လို ကြေးနီရောင် အသားအရည်အတွက် ဆေးနည်းပေးပါ…
ကိုဘလက် ကို ရီပလိုင်းထားတာ ကြည့်လိုက်။
အားကြီးပဲ.. မှတ်မိတော့ဘူး.. ကော်ပီလုပ်သွားပါတယ် အလှအပ အကြံပေးပညာရှင်ဆရာမ ကေကေဇီရယ်.. :))
များများ မှတ်စရာ အလိုဗူးလေ ခရစ်လေးရဲ့ နှစ်လုံးထဲ မှတ်ထား…. ဘာဒဲ့……………………………………………………………………………………………………………………..ကြောင်………………………………………………………………………………………………………………………..ကြီး
အစ တစ်လုံး ကဲ နဲ့ နောက်ဆုံး တစ်လုံး ဟိ ကို
ချုံ့ ဖတ် လိုက် ပါ ကြောင်း..
လှပြီး သား အသားအရေ ပိုင် ချင် မို့
အသုံး မလိုပါ .
အသုံးလို သူ များ ကို မလှ ဘူးဟု
စားသောက်ဆိုင် အပြင် လှပခြင်းအကျိုးပြု သစ်သီးဆိုင်ပါတွဲဖွင့်ပါဗျို့
Let’s try our best for our mother land, start from MG.
နည်းလမ်းတွေ များလွန်းလို့ မှတ်လို့ မနိုင်တော့ဘူး..။ အဲဒါကြောင့် အသီးထဲမှာ ကြက်သွန်၊ ဂျင်း၊ ငရုတ်သီး အဲဒီ ၃မျိုးကလွဲရင် တွေ့တာကောက်ပြီး မျက်နှာမှာ လိမ်းပစ်လိုက်တော့မယ်..။
ငယ်ငယ်ကတော့ အဲဒါတွေ လိုက်မှတ်၊တခုလောက်စမ်းလုပ်ပြီးရင် ထပ်မလုပ်ဖြစ်နဲ့။
ခုတော့ ရွာထဲဝင်ရတာ အချိန်မလောက်လို့ ခြေသည်းတောင် ဆိုးထားမိတာ ကွက်ကျားကို ပြန်မဖျက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။
ဒီအသက်မှတော့ ဒါတွေလုပ်လည်း နဂို ဆိုးတဲ့ရုပ်က လှမလာတော့ပါဘူးလေလို့ စိတ်ကိုလျှော့ပြီး စားပဲစားပလိုက်တော့မယ်။
မဟာတို့ လှပြီးသားမှန်း သိပြီးသားးးး
ကို ၂ လွှာပေါင်းမှ ၁ ရွက် ရဲ့ နေရာငှါးမယ်ဆို ၂ ဆိုင်လုံး လာဖွင့်လိုက်မယ်။
နေခြည် အဲဒါတွေနဲ့ ပေါင်းတင်တဲ့ နည်း ရှာလိုက်ဦးမယ်။ ဟီးဟီးးးး
ဆောင်းတွင်းရောက်လာလို့ ဒီပို့စ်ကို ပြန်ဖော်ပါသည်..